Wararka Maanta: Sabti, July 7 , 2018-Wararkii ugu danbeeyay mas'uuliyiin ka tirsan Soomaaliland oo ku dhintay weerar ka dhacay Sool
Sabti, July, 07, 2018 (HOL) - G/lle Saleebaan Cabdi Caatay ayaa dhintay, gudoomiyihii degmada Taleex isagana dhaawac culus ayaa soo gaadhey kaddib markii iyagoo safar ugu socdey Laascaanood ciidamada Puntland baleen.
C/rashiid Maxamed Axmed Xiir Gudoomiyaha Gobolka Xaysimo (Taleex) oo safarkaasi ka mid ahaa ayaa ka badbaadey oo soo gaadhey magaalada Laascaanood.
Falkan ayaa sida uu u dhacay laga bixinayaa sawiro iska soo horjeeda, iyadaa Wasiirka Biyaha Saleebaan Yuusuf Cali Koore uu sheegay isagoo jooga Hargeysa in ciidamo Puntland ahi ay dhexda u galeen oo saraakiishaa ay ku laayeen.
Sidoo kale saraakiil Puntland ka tirsan waxa ay HOL u sheegeen in ay nimankani anbad ahaayeen, ciidankuna ay rasaas dulmariyeen goortay ku soo dhowaadeen, kadibna sida ay sheegeen mid ka mid ah laba gaadhi oo is daba socdey uu dhacay, in ay dhaawaciina iyagu u gurmadeen oo samatabixiyeen ayay sheegteen.
"Waxaan saaraa gaadhka xili ay ahayd ma sixi karo laakiin xili habeenka intiisa badan tegey baan arkay laba gaadhi oo meel waqooyi barri igaga aadan maray oo si xawli u socda, waxaan u qaatay ciidamo puntland leedahay oo dhaqdhaqaaq wada, intaanan wax talaabo ah qaadin ayaa Rasaas kaga soo dhacday dhinicii ay u socdeen oo ciidamada Puntland fadhiisin u ahaa, wixii ka danbeeyey waxaa ii cadaatay in ay anbad yihiin" sidaa waxaa HOL u sheegay askari ciidanka Somaliland ka tirsan.
2011kii ayaa ciidamada Puntland kolanyo safar madax degmadaas ah oo ku sii jeeda Taleex ay jidka ka heleen, xiligaas oo uu ka baxsaday Wasiirka Biyaha Saleebaan Yuusuf Cali Koore.